Marketing amin'ny mpampiasa Smartwatch: Fikarohana tokony ho fantatrao | Martech Zone
Marketing amin'ny mpampiasa Smartwatch: Fikarohana tokony ho fantatrao
Alarobia, Febroary 3, 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Alohan'ny hamakianao ity lahatsoratra ity dia tokony hahafantatra zavatra roa momba ahy ianao. Tiako ny famantaranandro ary mpankafy Apple aho. Mampalahelo fa ny fitiavako famantaranandro dia tsy mifanandrify loatra amin'ny marika momba ny sangan'asa izay tadiaviko eo an-tànako - noho izany Apple Apple Watch dia nilaina. Ataoko fa tsy izaho irery no mieritreritra an'izany. Araka ny NetBase, ny Ny Apple Watch dia nandresy an'i Rolex amin'ny resaka sosialy.
Tsy nanana fanantenana firy aho fa hanova ny asako na ny fiainako manokana ny Apple Watch, saingy nahaliana ahy ny fiatraikany. Na dia voafatotra amina finday findainy aza ny ankamaroan'ny namako dia mirona handao ny findaiko eo akaiky eo aho ary hanadino izany tontolo andro. Ireo rindranasa izay tiako hampandrenesina momba ilay fiambenana ihany no nodioviko. Vokatr'izany dia tsy tonga amin'ny findaiko aho ary very ao anaty fampandrenesana app mandritra ny ora manaraka. Io irery no nahatonga azy io ho fampidiram-bola sarobidy amin'ny famokarako.
Fanadihadiana momba ny Smartwatch an'i Kentico dia andiany faha-10 amin'ny andiany Fikarohana Digital Experience Kentico mitohy. Na eo aza ny varotra tsy misy dikany, efa ho 60% ny valin-kafatra no te hanana smartwatch amin'ny farany; ary ny 36% dia mikasa ny hanao izany ao anatin'ny taona manaraka.
Ampidino ny Fikarohana Smartwatch an'i Kentico
Smartwatches dia maneho fotoana tokana ahafahan'izy ireo mampihatra fampiharana fahatelo. Ka na dia manandrana mamorona tranga fampiasana mahasarika ho an'ny smartwatch aza ireo mpanamboatra fitaovana, dia tokony hanara-maso akaiky ny efijery kely ihany koa ireo marika sy mpivarotra.
Ny ampahatelon'ny mpamaly dia tia ny hevitra hahazoana torolàlana, hanaraka ny sakafo sy ny fanatanjahan-tena, ny karoka ataon'ny feo, ary ny fampandrenesana amin'ny fotoana tena izy avy amin'ny seranam-piaramanidina, banky na tambajotra sosialy amin'ny alàlan'ny smartwatch. Ny fampidirana Apple Maps sy Watch dia tena tsara… eto ny manantena fa hihatsara hatrany ny kalitaon'ny sarintany!
Mpampiasa Smartwatch fanampiny:
71% amin'ireo mpanjifa no tsy maninona raha misy dokam-barotra voafantina atolotra amin'ny smartwatch
70% amin'ireo mpanjifa no mino fa hampiasa ilay smartwatch ho an'ny fampiasan'izy ireo manokana fotsiny
Ny ankamaroan'ny valinteny dia nilaza fa faly indrindra amin'ny hevitra ahazoana mailaka sy lahatsoratra amin'ny finday.
Ity misy infographic tsara izay mamaky ny sasany amin'ny zavatra hita:
Momba an'i Kentico
Kentico dia sehatra CMS, E-varotra, ary Marketing an-tserasera iray manontolo izay mitarika ny valin'ny asa aman-draharaha ho an'ireo orinasa amin'ny habe rehetra na eo an-toerana na eo amin'ny rahona. Manome mpanjifa sy mpiara-miasa fitaovana matanjaka sy feno ary vahaolana mifototra amin'ny mpanjifa izany hamoronana tranokala mahavariana sy hitantanana mora foana ny traikefan'ny mpanjifa ao anatin'ny tontolon'ny asa aman-draharaha. Ny fantatry ny vahaolana amin'ny tranonkala Kentico Web Content Management Solution ireo tranokala ivelan'ny boaty, fanamboarana mora ary misokatra API haingana miasa tranonkala. Rehefa atambatra amin'ny vahaolana feno mifangaro, ao anatin'izany ny Marketing amin'ny Internet, ny e-varotra, ny vondrom-piarahamonina an-tserasera ary ny Intranet sy ny fiaraha-miasa dia manatsara tanteraka ny traikefa ho an'ny mpanjifa nomerika amin'ny fantsona maro i Kentico.
Tags: apple watchkenticofamantaranandro samsungmanan-tsaina fiambenanafananganana smartwatchmijery
Ahoana ny fomba hialana amin'ny tahan'ny fifampiraharahana amin'ny mailaka